Ini ndinogona kuwana emahara sampuli?
Ehe, 1 yadhi yeMAHARA SAMPLE dziripo, isu takaonga nekuda kwekunzwisisa kwako kuti mutero wekutakura uchaunganidzwa.
Iwe une MOQ yeruvara rwakaratidzwa muiyi link?
Kwete MOQ yezvinhu zvakajairika zviripo, unogona odha pane zvawakumbira zvakawanda. Zvezvinhu zvakagadzirwa zvemavara zvichave nemadhiyadhi mazana matatu MOQ.
Nguva dzose zvinhu zvechitoro zvinotumirwa kunze mukati memazuva matatu mushure mekubhadharwa kwaitwa. Kune itsva kugadzirwa lead nguva ndeye 15-20 mazuva mushure mekugamuchira 30% dhipoziti. Kune yakasarudzika ruvara 7 mazuva erabhi mechi uye mazuva makumi maviri ekugadzira lead nguva.
Huganda hwekugadzira kana hupenyu hwejira hwakaita sei?
Kune yekugadzira yeganda ndeye Eco-inoshamwaridzika zvinhu zvinodzikisira uye zvinogona kutora makore matatu kusvika mashanu mumamiriro ezvinhu akanaka sekuchengetedza kubva pakudziya kwakanyanya tembiricha uye yakanyanya mwando nzvimbo. Kune microfiber dehwe iyo hupenyu hunogona kugara kweanopfuura makore gumi.
Ndinogona here kuva nekatalog yako?
Nekuda kwezvakasiyana zvigadzirwa, ndokumbira utizivise zvako zvaunoda kuti tikwanise kukuitira.
Tinogona kuve neyedu logo kana mhuka yekugadzirwa paganda?
Ndapota taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Tinogona sei kuvimbisa mhando?
Nguva dzose pre-kugadzirwa sampuro pamberi pekugadzirwa kwakawanda.
Nguva dzose yekupedzisira Kuongorora kusati kwatumirwa.
Sei uchifanira kutenga kubva kwatiri kwete kubva kune vamwe vanotengesa?
Tiri nyanzvi dzichiri, kugadzira uye Marketing PVC / PU / Semi PU / waakaita nedehwe / Microfiber nedehwe. Kunze kwemusika wakasimba wemakwikwi mutengo, akasiyana mavara uye echinyakare magadzirirwo aripo, uye hunhu hwakagadzikana kwazvo.
Ini handioni mitsara uye mavara andiri kuda pawebhusaiti yako. Zvekuita nazvo?
Ndokumbira utumire masampuli ako kukero yedu, uyezve tinogona kugona kusarudzira iwe zvinoenderana. Yedu R & D Lab ine vashandi vane hunyanzvi hwemakemikari, nyanzvi dzemavara uye zvigadzirwa zvekugadzira zvigadzirwa vanogona kugadzira zvigadzirwa zvechinyakare zvinosangana nezvako chaizvo.
Ndeipi nguva yekubhadhara yekambani yako?
Iyo yekubhadhara nguva yemutengi mutsva ndeye T / T 30% dhipoziti uye chiyero isati yatumirwa kana L / C pakuona.Tinogona kukurukura zvirinani yekubhadhara nguva mushure mekuraira kwakawanda mukubatana kwakanaka.